Archive du 20180209
Paikady politikan’ny fitondrana Terena hitroatra Ravalo…
Potehina ny fananany, gafiana, lazaina fa mpangalatra, hanaovana antsojay i Marc Ravalomanana, saingy tsy dia rototra firy ny amin’izany. Terena hitroatra mihitsy, ka miakatra isan’andro ny lentan’ny famotehana azy amin’ny lafiny rehetra.
Mpiasa sy tompon’andraikitra tsy HVM Miala any ny fanilihana avo lenta
Miala any ny rivodoza ho an’ny tompon’andraikitra isan-karazany any anaty rafi-panjakana, toy ny minisitera sy sampandraharaham-panjakana samihafa, ka maro no mihorohoro amin’ny toerany.
Fivoriana tsy ara-potoanan’ny Depiote Malagasy Any amin’ny governemanta ny baolina, hoy ny kestora Guy Rivo
Mba eritreritra niserana fotsiny ny nilazan’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy tamin’ny fotoam-pamaranana ny fivoriana ara-potoana faharoan’ity rafi-panjakana ity farany, hoy ny kestora faha-3 eo anivon’ity Antenimieram-pirenena ity, Guy Rivo Randrianarisoa raha nanontaniana ny amin’izay mety hisiana na tsia an’io fivoriana io izy omaly.
Fanjakana Rajaonarimampianina Sady votsa fiasa no mpampiesona
Manamaivan-javatra sy mitady fialana bala na koa zara raha mitady vahaolana petatoko no tena anton-draharahan’ny fitondram-panjakana HVM eo anatrehan’ny olana marolafy eto amin’ny firenena. Mandeha ireny ny resaka “kidnapping”, dia manaboribory resaka hatrany amin’ny hoe:
Mpanao politika Mangiana ny ankamaroany, fa nahoana ary ?
Mahavariana fa tsy dia aharenesam-peo ny ankamaroan’ireo mpanao politika sy antoko politika eto Madagasikara taorian’ny fampahafantaran`ny filoha Rajaonarimampianina ilay vina ``Fisandratana 2030`` sy ny an’ny filohan`ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina,
Tanànan’Andranofeno Atsimo Nizarana fitaovana ahazoana herinaratra
Natomboka omaly 8 febroary tao Andranofeno Atsimo, ny tetikasa Mijiro izay fanomezana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo havaozina miainga amin’ny herin'ny masoandro. Notolorana “Kit solaire”
Miarahaba jean a, rahatrizay tsy manam-pahefana intsony aloha ianaro dia hitako hoe mety aminareo ny manao sarimihetsika .Ao ny comedie, ao ny action, misy hatramin’ny horera sy ny Visa A.Mahay ianareo ka,
Vono olona mahatsiravina Notapahana ny lohany, norasarasaina ny vatany
Fanindroany izao no nisian’ny vehivavy hita faty norasarasaina tao Vatofotsy Antsirabe.
Mpivarotra amoron-dalana eny Andravoahangy Nentanina hiditra ao anaty tsena
Nidina ifotony tetsy amin’ny Tsenan’Andravoahangy ny delegen’ny Boriborintany fahatelo Andriamamonjisoa Rado sy ireo ekipany ary ny lehiben’ny tsena omaly 08 febroary 2018 maraina nanentana ireo mpivarotra amoron-dalana hiditra amin’ny ara-dalana ao anatin’ny tsena, satria efa misy toerana malalaka voatokana ho azy ireo ao.
Basikety « Coupe du Président zone nord » Hafana tanteraka ireo lalao 1/4-dalana anio
Mitohy hatrany ny fifaninanana basikety « Coupe du Président zone nord » andiany faha-4 tontosaina nanomboka ny sabotsy 3 febroary teo ao amin’ny kianja mitafon’Antsiranana.
«La jeune fille et le ballon ovale » Halefa voalohany eto Madagasikara
Hasongadin’ny horonantsary fanadihadiana novokarin’i Doc du Nord ary narindran’i Christophe Vindis niaraka tamin’ny « Association Terres en Mêlées » niforona teto Madagasikara tamin’ny taona 2011 ary tarihan’i Pierre Gony mpilalao rugby fahiny sy mpanazatra tao amin’ny klioban’ny Stade Toulousain any Frantsa ny fiaimpiainana manontolon’i Marcelia,
Aretina homamiadana Maro be ireo Malagasy tsy mahavita mitsabo tena
Anisan’ny aretina tena atahorana indrindra amin’izao ny aretin’ny homamiadana. Ireo tany mahantra toa antsika no tena mahita faisana amin’izany izay mandrafitra ny fahafatesan’ny 80%-n’ny mponina ao aminy. Ho antsika eto Madagasikara manokana dia mahatratra 25.000
Air Madagascar Mbola mibaby trosa 250 miliara ariary
Mbola lavitr’ezaka ny fanarenana ny Air Madagascar satria dia mibaby trosa maherin`ny 300 miliara Ariary ity kompaniam-pitaterana ity ka 50 miliara Ariary no efa voailika, izany hoe mbola misy 250 miliara ariary tsy maintsy efaina. Tsy handoa sy hanadio ny trosan`ny kompania Malagasy akory ny tanjon` ny fiaraha-miasa eo amin`ny ``Air Madagascar`` sy ny ``Air Austral`
Fitomboan`ny toekarena Sao dia voarebirebin`ny tarehimarika fotsiny
Anisan`ny sehatra iray lehibe ahafahana mitaratra ny tanjaky ny firenena ny fahasalaman`ny toekarena ao aminy. Misy anefa ny fepetra tokony ho feno amin`ny lafiny maro hijerena an`izany ary ohatra amin`ireny ny fitarafana ny fomba fiainan`ny olona tsirairay ao amin`ilay firenena.
Korea avaratra Nankalaza ny faha 70 taonan’ny tafika
Nankalaza ny faha-70 taona niorenan’ny tafika ry zareo Koreanina tavaratra omaly alakamisy 8 febroary. Nisy ny filatroan’ireo miaramila tao Pyongyang izay nahataitra ny mpanara-baovao ihany satria 1 andro alohan’ny lanonana fanokafana ny lalao olimpika any Pyeongchang any Korea Atsimo, izay toa fampisehoana hery amin’ny Amerikanina.